လက်ဆော့မိတဲ့အမှား.. ကယ်ကြပါ။ ~ စန္ဒကူး
ကူညီချင်တယ် .. ဒါပေမယ့် မလုပ်တတ်ဘူး.. နည်းပညာ ဆိုက်တွေမှာ ဘလော့ဂ်ခေါင်းစဉ်တွေရှိတတ်တယ် အဲမှာ ကြည့်ကြည့်ပါလား.. မတွေ့ရင် သူတို့ကို မေးနိုင်ပါတယ်.. ပြန်ဖြေကြပါတယ်.
ကူး.. ပုံတွေကို တစ်နေရာမှာ သွားတင်ပြီး ဘလော့ထဲကို လင့်နဲ့ ထည့်ပါလား.. တို့လဲ အပေါ်ဆုံးတစ့်ုက လွဲလို့ ဒီလိုဘဲ တင်တာ ..
ဒီနေရာမှာ ပုံတွေတင်လို့ရတယ်. တင်ပြီး 640*480 / 480*640 နေရာက Direct link to resized image ဆိုတဲ့ အဲဒီက လင့်ကို ယူလာပြီး ကိုယ့်ဘလော့မှာ ထည့်လိုက်ရုံဘဲ
ဒါဆို ပုံတွေ ဘယ်လောက်ထည့်ထည့် ဘလော့မှာ နေရာမယူတော့ဘူးလေ..
လုပ်ကြည့်လို့ အဆင်မပြေရင် chawchawgreen@gamil.com ကို မေလ်းပို့ပြီး ပြန်ပြောပါ။ အသေးစိတ် ပြန်ရှင်းပြပါမယ်..
မချောပြောသလိုသာ လုပ်ကြည့်လိုက် ကူးရေ..
ကိုယ်လည်း ရေးပဲရေးတတ်တာ နည်းပညာအကြောင်း ဘာမှမသိဘူး
အရမ်းကြီးလို့ ဂူဂဲလ်က ၀ယ်ခိုင်းတယ်
ဒါနဲ့ ချောပြောပြလို့ အဆင်ပြေသွားပြီ
ဒါပေမဲံ သူတို့ ပြောသလို အပေါ်ဆုံးက
ကူးကူးက ဘလောဂ့်ရေးတာလို့ နေရာပြည့်
သွားတာနေမှာပါ။ ကိုယ့်ဘလောဂ့်က ပုံတွေ
အရမ်းကြီးလို့လေ :) အဆင်ပြေပါစေ ညီမလေး
လုပ်တတ်ဘူးရှင့်။ ဖြေးဖြေးတော့အဆင်ပြေလာမှာပါ ကူးရေ...
ကူးကူး ပီကာစာက ပုံတွေ ဖျက်မိလိုက်သလား
ကိုယ်လည်း အဲ့လိုပဲဖြစ်တာ :) ဘလောဂ့်ကပုံတွေ အကုန်ပျက်သွားတယ်။ ချောကိုမေးကြည့် သူပြောသလို
ပုံတွေ SEIZE သေးသွားမှာလဲ လိုချင်ဘူး..
ဒါပေမယ့်ေ၇ွးစရာလမ်းမရှိ..း((
ပုံတွေက ဆိုဒ်သေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး Add Images နဲ့ ထည့်မဲ့ခါ FromaURL ကိုရွေးပြီး ပုံတင်ထားတဲ့နေရာက လင့်ကလေးကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ ပုံက ဘလော့ထဲကို ရောက်သွားတယ် ရောက်သွားပြီးရင် ပုံလေးပေါ် ကလစ်နှိပ်လိုက်။ အဲဒီမှာ small, Medium, Large X-Large, Original size ဆိုတာတွေထဲက ကြိုက်တဲ့ ဆိုဒ်ကိုရွေးလိုက်ရင် ကူးတင်ချင်တဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ ကိုက်ညီတာ တစ်ခုခုရပါလိမ့်မယ်.. ပုံသေးသွားမှာ စိတ်မပူပါနဲ့။ အဆင်ပြေမှာပါ။
ဘလော့ တစ်ခုတည်းကို နောက်ထပ် တခြား Email တွေကနေတဆင့် ပိုစ့်တင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ်ပိုင် Emailပွားထား လိုက်ရုံပါပဲ။ ဥပမာ ပိုစ်တင်ချင်တဲ့(ခု ပုံတင်မရတဲ့) Blog ရဲ့ Dashboard ကိုသွားပါ။ နောက်တဆင့်ပြီးတဆင့် settings... permissions...ကိုသွားပါ။ အဲဒီမှာ...
Blog Authors Your blog can have up to 100 authors. ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Add authors ကို ကလစ်လုပ်ပြီး ကိုတင်ချင်တဲ့ Email ကို inviteလုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ အဲဒီ ကိုယ်Invite လုပ်ထားတဲ့တစ်ခြားE mail ကနေ accept လုပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ အဲဒီကနေတင်လို့ရပါပြီ။ အဆင်ပြေ ပါစေ။
ကျွန်တော်လည်း ဘာမှမတတ်ပါဘူး။ဘလော့လေးလုပ်ချင်တာနဲ့ ဟို လုပ်ဒီလုပ်နဲ့သိထားတာလေး မျှလိုက်တာပါ...။
ဒီဘလော့ကို ကျွန်တော်မကြာခဏ ရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တိတ်တိတ်လေး ပဲ ပြန်သွားဖြစ်တယ်။း))
ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချောနဲ့ ကိုချစ်မောင်..
ကျနော်ကတော့ ပုံတွေကို တခြားဆိုဒ် တစ်ခုကနေ HTML ကုဒ်ယူပြီး blog မှာ ပြန်တင်ပါတယ်၊ အထက်မှာ ပြောကြသလို ဓါတ်ပုံတွေ လက်ခံတဲ့ လင်ခ့်တွေ အများ ကြီး ရှိပါတယ်၊ ကျနော် သုံးဖြစ်တာက flickr နဲ့ photobucket ပါပဲ၊ ပုံရဲ့အရွယ်အစားကို ကိုယ့် blog နဲ့ လိုက်အောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြင်နိုင်တယ်ဆိုရင် photobucket က ကောင်းပါတယ်၊ ဥပမာ-photoshop တို့၊ gimp တို့ကို သုံးပြီးတော့ပေါ့၊ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ ဆိုဒ်အတိုင်း ဘလော့ဂ်မှာ တင်လို့ရတယ်၊
မဟုတ်ရင်တော့ flickr က အဆင်ပြေပါတယ်၊ အထက်မှာ ပြောကြသလို small, medium, large စသဖြင့် ရွေးပြီး တင်ရုံပါပဲ၊ အဆင်ပြေပါစေဗျာ...။